Fanambarana ofisialy avy amin'ny governemanta Shenzhen: Naverina tamin'ny laoniny tanteraka ny seranan-tsambo Yantian tamin'ny 24 jona, ary niditra ara-dalàna ny fiasan'ny sambo.
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-07
Araka ny tatitra farany, tamin'ny 5:00 hariva tamin'ny 22 jona, nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Governemanta Monisipaly Shenzhen mba hitatitra ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny toe-javatra misy ny valan'aretina "5.21" ao Yantian, Shenzhen, ary ny famerenana ny famokarana ny Yantian International Container. ..
Nihena ny fanondranana vy ao Shina tamin'ny volana Mey noho ny politikan'ny hetra
Ny fanondranana vy tao Shina tamin'ny volana Mey dia nihena nanomboka tamin'ny Aprily satria nihena ny famandrihana fanondranana alohan'ny fanafoanan'i Beijing ny fihenam-bidy mba hanakanana ny fanondranana. Nihena 33,9 isan-jato ny fanondranana vy tamin’ny volana Aprily ka 5,27 tapitrisa t fa niakatra 19,8 isan-jato tamin’ny herintaona teo aloha, araka ny angon-drakitra Shinoa. ...
Ny Sampan-draharahan'ny Fanorenana tsy mahalala ny loza ateraky ny asbestos
Raha nanao atrikasa nanasongadinana ny fisian’ny asbestos amin’ny vokatra, indrindra ny fitaovam-panorenana ny minisiteran’ny Asa, ny zoma lasa teo, dia maro amin’ireo orinasa mpanao fanorenana sy mpiasa no tsy mahafantatra ny fisian’ny poizina sy ny loza mety aterany. Sok Kin, filoha mavitrika...
Mikasa ny hamelona indray ny tafo, ny indostrian'ny tanimanga
Sri Lanka Ceramic and Glass Council dia mikasa ny handray fepetra haingana hamerenana amin'ny laoniny ny vokatra vita amin'ny tanimanga mena eo an-toerana (biriky fananganana sy tafo tafo). Nanao lahateny nandritra ny Fivoriana faha-12 fanao isan-taona an'ny filohan'ny filankevitry ny seramika sy fitaratra ao Sri Lanka, Mahendra Jayasek...
Shigeru Ban dia namoaka drafitra ho an'ny “Tetikasa Nepal”
Namoaka drafitra ho an'ny “Tetikasa Nepaley” i Shigeru Ban — rafitra vita amin'ny hazo izay azo atambatra haingana sy mora, mba hametrahana ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany nandravarava tamin'ity Aprily ity tany Nepal izay namela olona an'aliny tsy manan-kialofana. Ny famolavolan'i Ban dia mitaky 3-by-7-foot...
PVC Translucent Tafo Sheet
pvc translucent tafo taratasy, ho toy ny karazana vaovao ara-tontolo iainana ara-nofo trano izay afaka manatsara ny jiro ny trano sy manatsara ny estetika ny trano, dia nankasitrahan'ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra, ary be mpampiasa amin'ny fialam-boly anatiny spor ...
Fanorenana ny tafo vaovaon'i St. Mary
LANCASTER – Sambany tao anatin’ny 150 taona no nahazo tafo vaovao ny Fiangonana St. Mary any Lancaster. “Natao tamin’ny fotoana nanorenana ny fiangonana ny tafo vita amin’ny vato fisaka tany am-boalohany ary nisy ny fanamboarana nandritra ny taona maro”, hoy i Md Mary of the Assumpt...
Tafon-jiro PVC Fampidirana
Ny tafon-jiro PVC dia manana toetra tsara isan-karazany. Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, ny fitaovana fanorenana dia havaozina tsy tapaka. Anisan'izany, ny jiro PVC dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny trano fonenana voankazo sy legioma, fiompiana biby fiompy, orinasa indostrialy ...
Tsara ve ny taila PVC?
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-21
Mihamaro ny orinasa sy ny olon-tsotra misafidy taila PVC rehefa mifidy tafo, satria tsy vitan'ny hoe mitahiry ny vidiny, fa misoroka ny olana maro koa. Tsy dia fantatry ny maro loatra ny momba ity karazana fitaovana tafo vaovao ity, inona no anton’ny fiantraikan’ny t...
Ny tsy fahampian'ny tafo vy vita amin'ny vato
Araka ny fantatsika rehetra, ny tafo mifono vato dia tena malaza tato anatin'ny taona vitsivitsy. Saingy misy ihany koa ny fatiantoka ho an'ny tafo vita amin'ny vato. Vidin'ny fampiasam-bola voalohany Ny tafo vita amin'ny vy vita amin'ny vato dia eo amin'ny faran'ny vidin'ny fitaovana tafo. Na izany aza, misafidy vy mifono vato fa tsy aspha...
Ny tranon'ny rafitra vy maivana sy ny taila PVC dia mifanentana tsara indrindra
Araka ny fantatsika rehetra, ny trano firafitry ny vy maivana dia naorina amin'ny hafainganam-pandeha haingana, miaraka amin'ny insulation mafana tsara sy ny angovo-mitsitsy vokany. Rehefa manorina trano vy maivana dia avo dia avo ny fepetra takiana amin'ny fananganana fitaovana tafo. Ny endriky ny tranobe nentim-paharazana amin'ny taila vita amin'ny sentetika dia lalina ...
Ny vidin'ny PVC Globle dia miakatra indray
Tamin'ity herinandro ity, ny vidin'ny PVC eran-tany dia nahatratra avo lenta vaovao, anisan'izany ny vidin'ny US $ 200 ka hatramin'ny US $ 1600 isaky ny taonina, ny vidin'ny PVC Eoropeana dia niakatra mihoatra ny 70 euro isaky ny taonina, ary ny vidin'ny tsena Aziatika dia niakatra 30 dolara amerikana. US $70 isaky ny taonina. Inoana fa ny teny vaovao momba ny Plastic Formosa ao Tai...